Tokony Hieritreritra ny Hiala Amin’ny Fianarana ve Aho? | Tanora
Izao no mila eritreretinao
Kilasy fahafiry no tokony hovitain’ny ankizy any aminareo, araka ny lalàna any? Efa nahavita hatramin’io kilasy io ve ianao? Milaza ny Romanina 13:1 fa tokony “hanaiky ny manam-pahefana” isika. Lasa tsy mankatò azy ireo ianao, raha miala nefa tsy nahavita hatramin’ny farany.
Efa tratranao ve ny tanjonao? Inona no tanjona noeritreretinao ho tratranao rehefa vita ny fianaranao? Mbola tsy hainao ve? Mila fantarinao izany. Raha tsy izany, dia toy ny mandeha lamasinina ianao, nefa tsy hainao ny toerana tianao haleha. Iaraho midinika amin’ny ray aman-dreninao àry ilay fizarana etsy ambany hoe “ Ny Tanjoko Amin’ny Fianarana.” Raha mbola tsy tratranao ilay tanjona nifanarahanareo nefa ianao efa miala, dia mitsoaka an-daharana ianao.
Raha miala amin’ny fianarana ianao, dia toy ny hoe mitsambikina avy eny ambony lamasinina nefa mbola tsy tonga akory
Nahoana ianao no te hiala? Te hiasa angamba ianao mba hanampiana ny fianakavianao, na te hanao asa soa. Tia tena kosa ianao raha hoe tsy te hanao fanadinana na tsy te hanao devoara no antony hialanao. Ny manahirana dia ny mamantatra hoe nahoana ianao no te hiala, ary antony tsara ilay izy sa fitiavan-tena. Ho diso fanantenana ianao raha ny hiala olana fotsiny no antony hialanao.
Raha miala amin’ny fianarana ianao, dia toy ny hoe mitsambikina avy eny ambony lamasinina nefa mbola tsy tonga. Mety tsy hahafinaritra ny ao anatin’ilay lamasinina sady ratsy toetra ny mpandeha. Raha mitsambikina avy eny anefa ianao, dia tsy ho tonga any amin’izay halehanao ary mety haratra be. Raha miala amin’ny fianarana koa ianao, dia mety ho sahirana vao hahita asa. Ary na mahazo asa aza ianao, dia mety ho kely kokoa ny karamanao raha ampitahaina amin’ny karama tokony ho azonao raha nahavita fianarana ianao.
Aza miala amin’ny fianarana àry fa manàna faharetana rehefa miatrika olana. Ho lasa hahay hiaritra ianao amin’izay ary ho vonona kokoa hiatrika olana rehefa miasa.
Ny Tanjoko Amin’ny Fianarana
Ny tena antony ianarana dia mba hanomanana anao hahita asa hivelomana sy hamelomana ny vady aman-janakao any aoriana any. (2 Tesalonianina 3:10, 12) Efa fantatrao ve hoe inona no asa tianao hatao, ary nahoana ny fianaranao no hanampy anao hiomana ho amin’izany? Valio ireto fanontaniana ireto mba hahitana raha manampy anao amin’izany ny fianarana ataonao:
Inona no zavatra haiko? (Ohatra: Mahay mifandray amin’olona ve aho? Tia manao asa tanana ve aho, na manamboatra zavatra? Mahay mamakafaka sy mamaha olana ve aho?)
Inona avy no asa azoko ampiasana ny zavatra haiko?
Inona avy no asa azo atao atỳ aminay?
Inona izao no zavatra ianarako ka hanampy ahy hahita asa?
Inona avy ny fianarana azoko isafidianana, mba ho mora kokoa amiko ny hanatratra ny tanjoko?
Tadidio fa ny tanjonao dia ny hahazo mari-pahaizana amin’ny zavatra nianaranao izay azonao ampiasaina. Aza manao zavatra tafahoatra àry ka hoe hianatra tsy misy farany, satria fotsiny hoe te hiala amin’ireo andraikitry ny olon-dehibe. Toy ny mpandeha mijanona mandrakizay “ao anaty lamasinina” ianao raha manao izany.